तपाईंको सामग्री मार्केटिंग क्र्याk्क गर्नुहोस् यी G Gaps | पहिचान गरेर Martech Zone
यसका अंशको रूपमा मलाई हिजो एक वेबिनर गर्न मनपर्‍यो तत्काल ई-प्रशिक्षण सामग्री मार्केटिंग भर्चुअल शिखर सम्मेलन। तपाईं अझै पनि नि: शुल्कको लागि दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, रेकर्डि watch हेर्नुहोस्, र ebooks र प्रस्तुतीकरणहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। मेरो विशिष्ट विषय रणनीतिमा छ जुन हामी काम गरिरहेछौं हाम्रो ग्राहकहरु संग पछिल्ला केहि बर्षहरुमा - तिनीहरूको सामग्री रणनीतिमा खालीपनहरू पहिचान गर्दै जसले उनीहरूलाई अधिकार र ड्राइभ रूपान्तरण बनाउनमा मद्दत गर्दछ।
जबकि सामग्री को क्वालिटी हाम्रो ग्राहकहरु को सफलता को लागी सर्वोपरि छ, यो अब कुनै प्रश्न छ कति लेख्न सामग्री। हाम्रो सबै ग्राहकहरु अब तिनीहरू प्रकाशक हुन् पहिचान। नयाँ प्रश्न हो तिनीहरूले के लेख्नु पर्छ। हाम्रो कामले हाम्रो ग्राहकहरूको सामग्री रणनीतिमा खाली ठाउँहरू फेला पारेको छ र विकास समाधानहरू जुन ती खाली ठाउँहरू भर्न सक्दछन्।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो ग्राहकहरूको लागि, जोसँग सम्पूर्ण समाचार कोठा छ, यो साधारण कार्य होईन। हामी प्रत्येक हप्ता २ लाख भन्दा बढी रेकर्डहरू आयात गर्दछौं कस्टम-बिल्ट र डिजाइन गरिएको बिग डाटा इञ्जिनमा जुन हामी निर्माण गर्छौं जहाँ हामी स्लाइस र पासा खोज्न सक्छौं, सामाजिक र विश्लेषण अवसरहरू पहिचान गर्न जतिसक्दो चाँडो डाटा। हाम्रो आफ्नै ब्लगका लागि यो अलि सजीलो छ। हामी हाम्रा उपकरणहरू समीक्षा गर्दछौं र अवसरहरू फेला पार्न मासिक आधारमा अनुसन्धान गर्छौं। यहाँ ब्रेकडाउन छ:
तपाईंको सामग्री रणनीतिमा ग्याप्स खोज्दै
अडिट प्रश्न र उत्तरहरू - तपाईंको पठाइएका फोल्डरहरू जाँच गर्नुहोस् (विशेष गरी तपाईंको व्यवसाय विकास / बिक्री टीम)। मेरो आफ्नै पठाइएको फोल्डरको विश्लेषण, म प्राय: हाम्रो ग्राहकहरु र सम्भावित प्रश्न सोध्छु। यदि तपाइँका ग्राहकहरू र सम्भावितहरूले सोधेका छन् भने, संभावनाहरू यो छ कि मानिसहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन् र ती जानकारी अनलाइन खोजी गर्दैछन्।
प्रतियोगिता - तपाइँ चाहानुहुन्छ कि मा तपाइँको ग्राहकहरु को दर्जा को छ? त्यहाँ छन् बजार मा महान उपकरणहरू जहाँ तपाइँ केवल तिनीहरूको डोमेनमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र ती वर्गीकृत कीवर्डहरूको सूचीको साथ आउँदछ - र पृष्ठहरू जुन श्रेणीमा छन्। अझ राम्रो, तपाईं आफ्नो डोमेन टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य डोमेनमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन किवर्डहरू साझामा छन्। यो खाली डाटाको खजाना हो!
रुझान - के प्रवृत्ति खोज्नुहोस् समयको साथ ती कीवर्डहरूसँग भइरहेको छ? यसले तपाईंलाई एक प्रभावी वार्षिक क्यालेन्डर योजनाको लागि सक्षम गर्दछ - तपाईंको सामग्रीको योजना बनाउन उत्तम अवधिहरू फेला पार्दछ। यदि तपाईं यसलाई निशान लिन चाहनुहुन्छ भने, सम्पादकीय क्यालेन्डर प्रयोग गर्नुहोस् - Kapost, Coschedule र फ्लो सम्पादन गर्नुहोस् WordPress को लागी, कम्पेन्डियम Oracle विपणन क्लाउडमा केहि हुन्।
सम्बन्धित सर्तहरू - यो के को बारे मा छैन तपाईं बेच्नुहोस्, यो श्रोताको बारेमा हो र के सूचना तिनीहरूले खोजी गर्दैछन्। गुगलमा कुञ्जी शब्द टाइप गर्नुहोस् र सम्बन्धित सर्तहरूको लागि तपाईंको खोजीको फुटर जाँच गर्नुहोस्। प्रयोग गर्नुहोस् वर्डट्रेकर जस्ता उपकरण र तपाईले साधारण खोजी प्रश्नहरू पनि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ जुन व्यक्तिहरू प्रयोग गर्दैछन्।
स्थान शीर्षकहरू - स्थानीय स्तर निर्धारण राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तर निर्धारण देखि बाधा छैन! क्षेत्रिय र्यान्क गर्न व्यवसायहरू र स्थानहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस् र प्रायः तपाईंले फराकिलो गैर-स्थान सर्तहरूमा स्तर पाउनुहुनेछ। स्थानीय जित्नुहोस् र तपाईं आफ्नो शहर वा राज्यहरूको सेवा बाहिर तपाईंको प्रभाव विस्तार जारी राख्नुहुनेछ।
मान प्रदान गर्नुहोस् - धेरै सामग्री रणनीतिहरू ब्रान्ड, उत्पादन वा सेवा वरपर केन्द्रित छन्। तपाइँको सामग्री तपाइँको दर्शक वरिपरि केन्द्रित हुनुपर्छ। तपाईंको श्रोतालाई मद्दत गर्नाले विश्वास र अख्तियारले गति बढाउने कुराको सुनिश्चित गर्दछ - एक रूपान्तरणको लागि अग्रणी। स further्लग्नतालाई अगाडि बढाउन विश्वसनीय स्रोतहरूबाट महान सामग्री बनाउनुहोस्। यदि तपाईं बिक्री पेशेवरहरू पुग्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने, अन्य उत्कृष्ट सामग्री प्रदान गर्नुहोस् जसले तिनीहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं घरमालिकहरूलाई मद्दत गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, लेख साझा गर्ने जसले बीमादेखि लिएर फिल्टरहरू परिवर्तन गर्नेमा मद्दत गर्दछ। सामग्री सधैं तपाइँको बिक्री को बारे मा हुनुहुन्न।
अब जब तपाइँसँग लेख्नको लागि उत्कृष्ट विषयहरू छन्, यो समय प्रतिस्पर्धाको लागि समय हो। तिम्ले पर्छ तपाईको सामग्री बाहिर हेक अनुकूलन गर्नुहोस् र प्रतिस्पर्धा भन्दा राम्रो लेख्न। प्राय: यसको मतलब भनेको गहिरो विस्तारमा जानु, भिजुअललाई बढी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु, र सहयोगी डेटा वा सन्दर्भहरू समावेश गर्नु हो। हामी प्राय: यो हाम्रा ग्राहकहरूको लागि इन्फोग्राफिक्स र ह्वाइटपेपरहरू विकास गरेर सम्पन्न गर्दछौं, त्यसो भए विस्तृत लेखहरू खोज्दछ जुन खोजीलाई जीत दिँदछ!
विश्लेषण - विजेता पृष्ठहरूको संरचना, साइट पदानुक्रम, इम्बेडेड माध्यम, शीर्षक, हेडिंग, र उपशीर्षक विश्लेषण गर्नुहोस् ताकि तपाईं अझ राम्रो पृष्ठ विकास गर्न सक्नुहुनेछ। इन्फोग्राफिक्स र भिडियोहरू यसको लागि उत्कृष्ट छ।
साझेदारी योग्य - सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको पृष्ठ सजिलैसँग सेयर गर्न योग्य छ, प्रभावकारी रूपमा microfor format को उपयोग र यसको पहुँच अधिकतम गर्न सामाजिक साझा बटन।
प्रबर्धन - लक्षित विज्ञापन किन्नुहोस् तपाईको प्रतिस्पर्धीलाई पुग्न सुनिश्चित गर्न।
टैग: उत्तरदर्शकभवन मूल्यप्रतिस्पर्धी सामग्री विश्लेषणसामग्री मार्केटिङसामग्री रणनीतिहरुसामग्री प्रवृत्तिgoogle trendsखाली ठाउँ पहिचान गर्नुहोस्स्थान आधारित सामग्रीबजार प्रस्तुतीकरणप्रस्तुतिप्रश्नस्लाइड शोमूल्यवान सामग्रीमूल्य
तपाईंको छवि सम्पत्तिलाई अनुकूलन गर्नका लागि sen आवश्यक सुझावहरू